११ वर्षकी बालिकाले पहिलो पटक मुख खोलिन् त्यो रात के भएको थियो ? ‘भुत हुँ भन्दै अंकलले बोकेर लानुभयो त्यसपछि’….हेर्नुहोस भिडियो – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/११ वर्षकी बालिकाले पहिलो पटक मुख खोलिन् त्यो रात के भएको थियो ? ‘भुत हुँ भन्दै अंकलले बोकेर लानुभयो त्यसपछि’….हेर्नुहोस भिडियो
११ वर्षकी बालिकाले पहिलो पटक मुख खोलिन् त्यो रात के भएको थियो ? ‘भुत हुँ भन्दै अंकलले बोकेर लानुभयो त्यसपछि’….हेर्नुहोस भिडियो
काठमाडौ । ‘म भुत हुँ’ भन्दै ११ वर्षकी बालिकालाई घरवाटै उठाएर खेतमा लगेर अनैतिक काम गर्ने एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । हजुरआमाको काखमा रहेकी ११ वर्षकी बालिकालाई उनले उठाएर खेतमा ल्याएका थिए । बालिकालाई हजुरआमाको काखवाट लिएर बाहिर निस्केपछि बालिकाले ‘अंकल मलाई कहाँ लैजान लाग्नु भएको हो’ भनेर प्रश्न गरिन्, त्यती बेला ति युवाले ‘म भुत हुँ’ भनेर बोकेर ल्याएका थिए । ति युवाले त्यस्तो भनेपछि बालिका डराइन् ।
अहिले ति बालिकाको अवस्था गम्भिर छ । बर्दियामा भएको यो घटनाले अहिले गाउँले सबैलाई अचम्म बनाएको छ । घटना भएको स्थलमा त्यसको तीन दिन पछि आफन्तले बालिकाको कपडा फेला पारेका छन् । राति बालिका घटना पछि घर निकै गम्भिर अवस्थामा पुगेकी थिइन् । उनले घरमा पुगेपछि मलाई अंकलले अनैतिक काम गरे भनेर सुनाएकी थिइन् ।
ति युवाले ‘म तिमीलाई कान्छी बनाएर राख्छु’ भनेर फकाएको बालिकाले बताएकी छन् । त्यतीबेला उनले ‘हुन्छ म ठूली भएपछि कान्छी बनेर तपाईको घरमा आउँछु’ भनेर भनेर आफु उम्कन सफल भएको आमाबुवालाई बताएकी थिइन् ।
निदाएकी बालिकालाई उठाएर ल्याएका उनले ‘म भुत हुँ’ भन्दै खेतमा लगेर दुई तिन पटक अनैतिक काम गरेको बताएकी थिइन् । ति युवाले ‘म ठेकेदारको छोरा हो। मेरो तीन तलाको घर छ । म तिमीलाई निकै माया गर्छु कान्छि बनाएर राख्छु’ भनेर फकाउँदै अनैतिक काम गरेका थिए ।
जति फुत्कन खोज्दा पनि नदिएपछि ति बालिकाले ‘मलाई खोज्दै आमाबुवा आउनुभएको छ म ठूली भएपछि कान्छी बनेर आउँछु’ भनेर झुक्याउन खोजेकी थिइन् । उनले ‘अरु मान्छे आउदैछन् भने फुत्किएर भा’गेको बताएकी छन् । ति पुरुषको यस अघि नै दुई पटक विवाह भइसकेको छ ।
लमजुङमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु
बिहीबारको दिन के गर्दा सुभफल मिल्छ र के काम नगर्ने ?
निर्मलालाई न्याय माग्दै प्रधानमन्त्री सहित नेताका तस्बिरमा कमेन्टको ओइरो
एक युवतीले फेसबुकमा राम्रो फोटो राखेर केटाहरु फसाए पछी…
अ’चम्मै भो ! नेपालमै एउटै पु’रुषका ४-४ ओटी श्री’मती, बि’धुवा युव’तीलाई समेत छो’डेन, रु’दै आए श्रीमती